Ọnwụ | Ihe Baịbụl Kwuru
Ebee ka ndị nwụrụ anwụ nọ?
“Ájá ka ị bụ, ọ bụkwa n’ájá ka ị ga-alaghachi.”—Jenesis 3:19.
Ụfọdụ ndị na-ekwu na ndị nwụrụ anwụ na-aga eluigwe, ọkụ ala mmụọ, pọgatrị, ma ọ bụ Limbo. Ndị ọzọ kwetara na onye nwụrụ anwụ nwere ike ghọọ ọkụkọ ma ọ bụ ewu ma ọ bụkwanụ ihe ọzọ dị ndụ. E nwekwara ndị na-ekwu na onye nwụhaala, nke ya agaala.
Ekliziastis isi itoolu amaokwu iri kwuru, sị: “Ọrụ ma ọ bụ ichepụta ihe ma ọ bụ ihe ọmụma ma ọ bụ amamihe adịghị na Shiol, ebe ị na-aga.” Baịbụl kwukwara ihe na-eme ma mmadụ ma anụmanụ ma ha nwụọ. Ọ sịrị: “Ha niile na-aga n’otu ebe. Ọ bụ n’ájá ka ha niile si, ọ bụkwa n’ájá ka ha niile na-alaghachi.”—Ekliziastis 3:20.
Gịnị na-eme ndị mmadụ ma ha nwụọ?
“Mmụọ ya na-apụ, o wee laghachi n’ala o si pụta; n’ụbọchị ahụ, echiche ya na-ala n’iyi.”—Abụ Ọma 146:4.
Ihe a kụziiri ọtụtụ ndị bụ na ọ bụ ihe mmadụ mere mgbe ọ nọ n’ụwa ga-ekpebi ebe ọ ga-aga ma ọ nwụọ. O mee ihe ọma, ọ gaa eluigwe; o mee ihe ọjọọ, ọ gaa ọkụ mmụọ. Ha na-ekwu na onye nwụọ, a ga-asachapụ ya njọ o mere tupu o nwee ike ịgakwu Chineke. Ndị a na-asachapụghị njọ ha agaghị enwe obi ụtọ ruo ebighị ebi.
Ndị nwụrụ anwụ anaghị enwe obi ụtọ nke ha ji ata ahụhụ. Ebe ọ bụ na ha amaghị ihe ọ bụla, ha anaghị enyere ndị dị ndụ aka, ha anaghịkwa emerụ ha ahụ́. Ekliziastis 9:5, 6 sịrị: “Ndị dị ndụ maara na ha ga-anwụ; ma ndị nwụrụ anwụ amaghị ihe ọ bụla ma ọlị . . . Ịhụnanya ha na ịkpọasị ha na ekworo ha alaworị n’iyi, ọ dịkwaghị òkè ha nwere ruo mgbe ebighị ebi n’ihe ọ bụla a ga-eme n’okpuru anyanwụ.”
“Ọ bụrụ na mmadụ anwụọ, ọ̀ pụrụ ịdị ndụ ọzọ? M ga-echere ruo ogologo oge niile a manyere m ichere, ruo mgbe a ga-eme ka m nwere onwe m.”—Job 14:14.
Ndị mmadụ na-ekwu na onye e kpebiri na ọ ga-aga ọkụ mmụọ, nke ya agaala. Ha na-asị na a ga-atagide ya ahụhụ n’ọkụ mmụọ ruo ebighị ebi. Ha na-ekwukwa na ndị nke nọ na pọgatrị na-agawa eluigwe ma e jiri ọkụ sachapụchaa ha njọ ha.
Baịbụl kwuru na Ọkpara Chineke ga-akpọlite ndị nwụrụ anwụ ka ha biri n’ụwa. Baịbụl sịkwara: “Ka ihe a ghara iju unu anya, n’ihi na oge awa na-abịa mgbe ndị niile nọ n’ili ncheta ga-anụ olu ya wee pụta.” (Jọn 5:26, 28, 29) Ọ bụ ihe mmadụ mere mgbe o si n’ọnwụ bilie ga-ekpebi ma ọ̀ ga-adị ndụ ebighị ebi. *
^ para. 14 Ị chọọ ịmatakwu banyere ihe Baịbụl kwuru banyere ịkpọlite ndị nwụrụ anwụ, gụọ isi nke 7 n’akwụkwọ bụ́ Gịnị n’Ezie Ka Bible Na-akụzi? Ọ bụ Ndịàmà Jehova bipụtara ya.
Gịnị Ka Baịbụl Kwuru Banyere Ndị Nwụrụ Anwụ?
mailto:?body=Gịnị Ka Baịbụl Kwuru Banyere Ndị Nwụrụ Anwụ?%0a%0ahttps%3A%2F%2Fwww.jw.org%2Ffinder%3Fdocid%3D102014204%26wtlocale%3DIB%26srcid=share⊂ject=Gịnị Ka Baịbụl Kwuru Banyere Ndị Nwụrụ Anwụ?